Rad Ruvara PVC/PU/Naironi yakavharwa simbi waya tambo
Rad plastic coated tambo inoshandiswa zvakanyanya mukusvetuka tambo, Leash tambo, Fence tambo Tambo yedu ine marudzi matatu ekujeka, kutaridzika kwakanaka, matatu mavara eopaque, semi-pachena uye akajeka zvizere.
Material Waya yemukati: Magetsi emagetsi/Hot-dip galvanized/304 simbi isina tsvina tamboKupfeka kwekunze: PVC/PU/Naironi
Iyi tambo yewaya yakagadzirwa ne7 tambo ine 7 waya mune yega yega iyo inopa kuchinjika uye kusimba.iyi 7x7 stand core ine ronda rakasimba uye ine simba rekutakura mutoro wakasimba.1/16 inch 304 Stainless simbi haipindi mvura, inodzivirira ngura, isingadzire, isingapfeki;pasi rakatsetseka, pasina mabura.
Iyo 328ft Stainless simbi tambo haibatike nyore uye inochekwa kuchekwa pakureba kunodiwa.Yakakwana kune zvemukati zvekunze zvinangwa, senge chandeliers, tambo dzembatya, tambo dzemheni pakati pemiti, mitsara yegadheni, tambo yekuredza, njanji, mabhoti, DIY tambo dzemwenje kuseri kwemba yako, nezvimwe.
368lbs Kupwanya simba, yakasimba tambo isina tsvina.Inogona kuturika 1.5 times Schwarzenegger kana Trump huremu zvinhu.
Sevhisi Yekusimbisa Hunhu:
Zvakapfuura: Black Ruvara PVC/PU/Naironi yakavharwa simbi waya tambo
Zvinotevera: Ruvara rwakarukwa simbi waya tambo PVC PU Nylon coating kwakakurudzira waya waya
svetuka tambo tenga, kugwinya kusvetuka tambo, nyanzvi yekusvetuka tambo, kusvetuka tambo akachenjera, tambo yokusvetuka isina tambo, bata kusvetuka tambo,